Zimbabwe 'doomed without whites', says outgoing Zanu-PF MP | News24
Tshuma said that Mugabe made a mistake when he told Tony Blair to "keep your England and I'll keep my Zimbabwe".
"Yes, we kept our Zimbabwe but what kind of Zimbabwe did we keep? One thing that I have been made to understand and agree strongly whether painful or not, we cannot do away with that person called umkhiwa (white)."
At the height of land seizures in Zimbabwe in 2002, Mugabe denounced the then British prime minister Tony Blair, telling him: "Let me keep my Zimbabwe".
To a round of applause from the conference hall, the Zimbabwean leader declared: "So Blair, keep your England and let me keep my Zimbabwe," said the Guardian.
Meanwhile, Mugabe's successor, President Emmerson Mnangagwa, has promised to work towards ending Zimbabwe's isolation from the international world.
Mnangagwa indicated that his priorities were to revive the southern African nation's ailing economy and fight corruption.
"My government is committed to open Zimbabwe out to investment by building a free and transparent economy which benefits Zimbabweans and is welcoming to outsiders," Mnangagwa was quoted as saying during his first state of the nation address.